सरकारी–निजी स्कुल - परिहास - नेपाल
गएको साता एसईईको परीक्षा सार्वजनिक भयो । नतिजा आउनेबित्तिकै पुनः एक पटक सरकारी स्कुल र निजी स्कुलको तुलना सुरु भइहाल्यो । सरकारी स्कुलमा पढ्नेहरु सी प्लस बढी, निजी स्कुल पढ्नेहरु ए प्लस बढी ।
तर सरकारी स्कुलका पक्षधरको तर्क छ, सरकारी स्कुल नराम्रो होइन । हामी पनि सरकारी स्कुलै पढेर आएका हौँ । अहिले देशमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायाधीश, सचिव आदि भएका हस्तीहरु जम्मै सरकारी स्कुल नै पढेर आएका हुन् । यस्ता जनशक्ति तयार गर्ने सरकारी स्कुललाई कसरी नराम्रो भन्ने ? भन्नाले देश यो दुर्गतिमा पुग्नुको पछाडि सरकारी स्कुलको पनि हात रहेछ, हैन ?
प्रकाशित: असार २७, २०७६